Ngwanrọ nchekwa data: Akụkụ, ụdị, na ndị ọzọ - VidaBytes | LifeBytes
Ngwanrọ ọdụ data: Atụmatụ, ụdị, na ndị ọzọ
Techno Informatics | | Mmemme
Ngwa teknụzụ na ngwaọrụ nwere ngalaba ezi uche dị na ya maka mmezu nke ọrụ ha, a na -akpọ nke a software ngwanrọ nke na -eweta ụdịdị dị iche iche.
Ọ mejupụtara ngalaba ezi uche dị na kọmpụta
1 Ngwa ngwanrọ
1.1 Njirimara ngwanrọ ntọala
2.1 Ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala
2.2 Ndị na -ebu mmemme
2.5 Sistemụ arụmọrụ
Ka ọ dị ugbu a, anyị bi n'ime ụwa ebe teknụzụ dị mkpa maka ọrụ ụbọchị niile, softwares bụ mmemme achọtara na kọmpụta nke na -enye ohere igbu ogbugbu n'usoro usoro data, yana ịnyefe ozi na ibe. Dị ka iwu ejiri na kọmpụta ma ọ bụ ụfọdụ ngwa elektrọnik.
Mmekọrịta nke ngwaike na ngwanrọ na akụrụngwa na -arụ ọrụ site n'aka ndị ọkwọ ụgbọ ala, n'ihi nke a ọ dị mkpa na ngwaọrụ ma ọ bụ kọmpụta nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala na -ahụ maka ịme sistemụ arụmọrụ n'ụzọ zuru oke. N'ime kọmpụta ndị a ị nwere ike ịnwe mmemme dị iche iche dabere na mbufe data n'etiti sistemụ arụmọrụ na kọmputa.
A na -ejikwa ngwanrọ ntọala jikwaa ngalaba ezi uche ọ bụla nke kọmpụta, nke a makwaara dị ka ngwanrọ sistemụ; Ọ bụ ya na -ahụ maka ngwa kọmpụta dị na kọmpụta nke dị mkpa maka mmekọrịta onye ọrụ na interface dị na ngwa elektrọnik, maka nke a ọ dị mkpa ịmata ụdị na njirimara ha.
Njirimara nke sbase oftware
Otu n'ime ọrụ ya bụ inye sistemụ mmekọrịta n'etiti ngwaọrụ na onye ọrụ, iji hụ na arụmọrụ dị na mmeju nke mmemme etinyere yana iwu etinyere. N'ụzọ dị otu a, ị nwere ike ịbawanye arụmọrụ nke ọma na sistemụ kọmputa, yabụ ị nwere ohere iji uru niile na mmelite ọ bụla.
Ekele maka sọftụwia bụ isi, akụrụngwa na ngwaọrụ nwere ikike ịbawanye ọrụ ha na sistemụ, ya bụ, ọ na -abawanye ọsọ nke mbufe data iji zere nsogbu ọ bụla na mmeju nke mmemme ma ọ bụ ngwa; n'otu aka ahụ, ọ na -enye ngwaọrụ dị iche iche a ga -eji na ọnọdụ dị iche iche.
A na -abawanye arụmọrụ na sistemụ arụmọrụ site na ijiri sọftụwia bụ isi, ekele nke a nwere ike ịbawanye ndụ bara uru nke ngwaọrụ mebere kọmputa. Yabụ enwere ike ikwu na echekwara arụmọrụ teknụzụ ka oge ka ukwuu dakọtara na mmelite a na -ewepụta kwa ụbọchị, ka etinyere ya maka oge ka ukwuu.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ sistemụ nwere sọftụwia isi dị mma na nke kachasị mma, n'etiti ha Windows pụtara, nke mejupụtara sistemụ arụmọrụ Microsoft mepụtara, n'otu aka ahụ enwere Mac Os nke Apple mepụtara; A maara ụdị ndị a n'ụwa niile maka ịbụ ngwaahịa dị elu yana inye otu n'ime ọrụ kacha mma n'ọhịa kọmputa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma gbasara teknụzụ na -abawanye mmepe nke ibe weebụ, mgbe ahụ a na -akpọ gị oku ka ị gụọ akụkọ ahụ Kedu ihe bụ Drupal? ebe akọwara njirimara ya, modulu ya, ọrụ ya, ụkpụrụ ụlọ ya na akụkọ ya.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -esonye na mmepe nke sistemụ wee bụrụ sọftụwia ntọala iji bulie ogo nke igbu data. Njirimara nke ọ bụla dị iche na -arụ ọrụ nke interface ahụ, yana na ngwaọrụ ole onye ọrụ nwere ike itinye n'ọrụ dabere na okwu bilitere.
Dabere na mpaghara nke akụkụ ezi uche dị na akụrụngwa, enwere ike ikpebi ụfọdụ softwares dị mkpa, nke nwere ọrụ a kapịrị ọnụ ma na -enyere aka ime ngwa dị ka onye ọrụ si eji ya. Ha dịkwa mkpa maka ịmalite kọmputa ma ọ bụ maka nhazi nke ịchọrọ itinye na sistemụ arụmọrụ
Ngwanrọ bụ isi bụ maka mmezu nke sistemụ arụmọrụ na kọmpụta, enwere ọtụtụ ụdị dị iche na ọrụ na ike ha. N'ihi nke a, ụdị ndị a na -etinyekarị na sistemụ arụmọrụ yana njiri mara ha ka ị nwee ike mata uru na oke ha:
Ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala
N'ime ụdị sọftụwia bụ isi, ọ nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala nke a makwaara dị ka ndị ọkwọ ụgbọala ngwaọrụ. arụnyere na kọmpụta, n'ụzọ na -enye ohere ịrụ ọrụ ya nke ọma.
Site na ngwanrọ a bụ isi dị ka ọkwọ ụgbọ ala enwere njikọ nke ngwaike ọ bụla na ngwanrọ kwekọrọ na ya, ihe anụ ahụ ndị a chọrọ ngalaba ezi uche dị na kọmpụta ka o wee nwee ike izipu akara n'ụdị bits iji rụọ ọrụ njirimara ya; na nke a, onye ọrụ nwere ohere nke ịme ihe ọ bụla oge ọ bụla ọ dị mkpa.
Ọ na -enye ohere itinye mmemme na sistemụ arụmọrụ site na ngwa nke arụnyere arụnyere ma ọ bụ jikọọ na kọmpụta. Ndị ọkwọ ụgbọ ala na -ahụ maka ijikwa ngwaike ọ bụla, yabụ ahaziri ha n'ụzọ nke na onye ọrụ ahụ enweghị nsogbu na mmejuputa akụkụ ezi uche nke mmemme a kapịrị ọnụ.
Ndị na -ebu mmemme
Ngwa ngwanrọ ọzọ bụ onye na -ebuputa mmemme nke nwere ikike ijikwa ogbugbu nke mmemme ọ bụla na kọmpụta yana na -achịkwa mmecha nke ọrụ ọ bụla enyere sistemụ, nke a makwaara dị ka Mbido, ọ bụ ya na -enye onye ọrụ njikwa. mmegharị arụmọrụ dijitalụ na ngwaọrụ iji mụbaa arụmọrụ ya.
Site na ngwanrọ a, enwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla na kọmpụta site na mmemme ma ọ bụ ngwa akọwapụtara, nke a bụ n'ihi na mgbe ụfọdụ ngwaọrụ enweghị ike mezue ọrụ n'ihi enweghị akụrụngwa na -enyere aka na mbufe data. sistemụ arụmọrụ na mmemme ahụ, na -ekpughe onwe ya na mmekọrịta onye ọrụ.
Site na ndị na -ebugo mmemme, ọ na -enye ohere na mgbaama ọ bụla zitere site na ihe anụ ahụ nwere ike igbu n'ụzọ zuru oke na sọftụwia ejiri, a na -ebufe data site na mgbe mmemme ahụ malitere ruo mgbe emechiri ngwa ya, kọmpụta na -ahụ maka ịchekwa faịlụ ma ọ bụ ozi nwa oge dị ka onye ọrụ gwara sistemụ arụmọrụ.
BIOS bụ ngwanrọ bụ isi dị na sistemụ arụmọrụ, ọ bụkwa otu n'ime ndị ama ama ama maka na enwere ike idozi ọtụtụ nsogbu site na ngwa a. Ọ na -amalite site na mgbe kọmputa bidoro sistemụ, yabụ na ọ dị na igwe ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ elektrọnik ka o wee nwee ike mebie mmalite sistemụ ahụ nke ọma.
BIOS na -ejikwa ngwaọrụ kọmputa wee nye ohere na onye ọrụ nwere ike ịnweta ma jikwaa site na ahụigodo na -pịa igodo akọwapụtara nke a ga -etinyerịrị na nhazi nke ngwanrọ a bụ isi. Site na nke a ị nwere ike tinye menu nke ime sistemụ iji mee mgbanwe ọ bụla gbasara kọmpụta dịka ọ dị.
Enwere ike na sistemụ arụmọrụ adaghị na kọmpụta ma ọ bụ enwere ihe mgbagwoju anya na mmemme nke mmemme, site na BIOS enwere ike iweghachite ma ọ bụ dozie ọdịda a na akụrụngwa, agbanyeghị na enwere ike na kọmputa nwere njehie dị na BIOS yabụ achọrọ usoro dị mgbagwoju anya iji dozie ya.
N'ikpeazụ, enwere sọftụwia bụ isi akpọrọ Firmware, ọ nwere nnukwu agwa na -enye ndị ọrụ ohere itinye ya na kọmpụta ha na -enweghị nsogbu ọ bụla na mmemme mmemme. Ọ mejupụtara ebe nchekwa nke ngwaọrụ nke enweghị ike wepu ya na sistemụ, ọ bụkwa ya na -ahụ maka njikwa sekit ndị mejupụtara akụrụngwa ka ha wee rụọ ọrụ n'ụzọ kacha mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma gbasara asụsụ mmemme, mgbe ahụ a na -agba gị ume ịhụ akụkọ dị na ya Mmemme C, ebe a kọwara uru ya, ọghọm ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ha nwere mmemme etinyere na kọmpụta ka ọ bụrụ interface ha, nke mere na ha bụ sistemụ sistemụ. Ọ bụkwa akụkụ nke BIOS kwekọrọ na kọmpụta ahụ, ebe ọ bụ na site na nhazi ya, enwere ike ịhazi oke na ọrụ ndị a ga -emerịrị na akụrụngwa dịka mkpa onye ọrụ si dị.
Site na sistemụ arụmọrụ dị ka ngwanrọ ntọala, enwere ike ị nweta arụmọrụ kachasị mma na mmeju nke ngwa yana nnyefe data nke a ga -eme, ọsọ ọsọ na -arụ ọrụ nke ukwuu ka nsogbu dị na Malite kọmpụta na iji otu ihe. mmemme chọrọ akụrụngwa kọmputa, maka nke a ọ dị mkpa iburu n'uche ntọala BIOS.
Ọ na -ewepụta ọnọdụ gburugburu sistemụ kọmputa ka ọ dị mfe iji mmemme dị iche iche etinyere na kọmpụta ahụ; Ọ dị mkpa ịme nbudata kwekọrọ na ngwanrọ ụfọdụ achọrọ na akụrụngwa na -ekwe nkwa ịrụ ọrụ ya na 100% nke arụmọrụ yana arụmọrụ ya, n'ihi nke a ọsọ nke nnyefe data a na -eme na mpaghara ọ bụla bụ n'ime obere oge.
N'ihi nke a ọ dị ezigbo mkpa na onye ọrụ nwere ihe ọmụma gbasara njirimara na akụrụngwa etinyere na kọmpụta ma ọ bụ na ngwaọrụ, n'ụzọ dị otu a, ha nwere ike nwee ụzọ ha ga -esi bulie ọrụ ha bụ isi ma tinyekwa ngwa ọhụrụ na -aga n'ihu. sistemụ arụmọrụ kọmputa, na -agbasawanye ojiji ha na mpaghara dị iche iche dịka onye ọrụ rụnyere.
A na -akọwa sistemụ arụmọrụ dị ka ngwanrọ bụ isi site na ịbụ mmemme nwere oke ike na kọmpụta, n'aka nke ya, ha nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu karịa ụdị sọftụwia ndị ọzọ, yabụ enwere ikike dị ukwuu ịchekwa na ịkwaga data dị iche iche, ya bụ , ị nwere ike ịme mmemme dị iche iche n'otu oge na -enweghị sistemụ na -ada na arụmọrụ ya.
Otu sistemụ arụmọrụ a na -ahụkarị ma ọ bụ nke a na -ejikarị eme ihe n'ihi àgwà ya bụ Windows, nke a bụ n'ihi teknụzụ ya na ihe ọmụma, ebe ọ nwere ngwaọrụ dị iche iche na -enye ohere ka arụ ọrụ kachasị nke sọftụwia arụnyere na kọmputa, ọ nwere oghere. isi mmalite ka onye ọrụ nwee ike ịhazi nhazi nkeonwe ya ma megharịa ọrụ ha.
Enwekwara sistemụ arụmọrụ nke Apple mepụtara nke mejupụtara Mac Os, ọ nwere ike nwee ike mechie isi mmalite nke akara aka ka onye ọrụ nwee ike ịnapụ data etinyere na kọmpụta ahụ. N'otu aka ahụ, enwere Linux na Unix nke e ji amapụta ya na koodu mepere emepe ka ọ dịrị onye ọrụ na -etinye ya na kọmpụta ma ọ bụ ngwaọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Mmemme » Ngwanrọ ọdụ data: Atụmatụ, ụdị, na ndị ọzọ
Ngwa anya na Spain Mara mkpuchi gị ugbu a!
Gịnị bụ proxy? Njirimara sava